टी–१० क्रिकेट लिगः पहिलो ओभरमै सन्दीपले विकेट लिए ! - Everest Dainik - News from Nepal
टी–१० क्रिकेट लिगः पहिलो ओभरमै सन्दीपले विकेट लिए !
काठमाडौं, मंसिर ९ । यूइएमा जारी टी १० क्रिकेट लिगमा आज पनि नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले शानदार प्रदर्शन गरेका छन् । आज पनि उनले पहिलो ओभरमै विकेट लिन सफल भएका छन् ।
आज उनको टिम केरेला किग्सले राजपुत्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सन्दीपले अफगानिस्तानका बिस्फोटक ब्याट्स्म्यान मोहम्मद साहज्डको विकेट लिएका हुन् । उनले आज आफ्नो पहिलो ओभरमा ६ रन खर्च गरेका छन् । सन्दीपले यसअघि २ खेलमा ४ विकेट लिइसकेका छन् ।